Apple waxay kudhameysaa bixinta dhamaan canshuuraha ay ku laheyd dowlada Ireland | Wararka IPhone
Apple waxay ku egtahay bixinta dhamaan canshuuraha ay ku laheyd dowlada Ireland
Haddii aan ka hadalno canshuuraha waxaan ka hadleynaa arrin cakiran ... Marar badan ayay dowladaha laftoodu dib u dhigaan ururinta si ay u soo jiitaan shirkadahaas. Waxyaabaha ayaa isbedelaya markii Midowga Yurub uu soo galo ciyaarta, waxayna umuuqataa inay ahaan jireen Ururada reer Yurub kuwa ku dhiirrigelin lahaa Apple inay joojiso bixinta 14.300 milyan oo euro oo ay ku lahaayeen dowladda Ireland. Ka dib boodboodka waxaan kuu sheegeynaa sida arintan oo dhan ay ula xiriirto canshuuraha ay ahayd in dowlada Irish ay aruuriso oo aakhirka ay ku dhiirogelisay inay sidaas sameyso Midowga Yurub lafteeda ...
Horey ayey u ahayd bishii Ogosto 2016 markii uu ahaa Gudoomiyaha Tartanka Midowga Yurub, Margrethe Vestager, waxay ku dhiiri galisay dawlada Ireland inay Apple wax ka waydiiso 13.100 billion euros canshuuraha aan la soo uruurin. Toddobaadkan waxay ahayd markii dowladda Ireland ay u xaqiijisay Vestager in Apple waxay bixin laheyd lacagtaan dhib la'aan iyadoo ay usii dheertahay 1.200 milyan oo yuuro oo dheeri ah dulsaarka kuxiran awgood maxaa yeelay waxaad bixisay qiimo jaban. Lacagaha matalaya 4.7% ee waxsoosaarka dalka sanadkii 2017, sidaa darteed lama fahmin sababta madaxa fulinta ee Ireland uusan u dooneynin inuu aruuriyo lacagtaan ilaa Midowga Yurub laftiisu soo jeediyo aruurinta. Waa hagaag runtii fikradda ah in aan la ururin waxaa dhiirrigeliya xaqiiqda ah in Ireland ay tahay xarunta dhexe ee Yurub ee shirkado badan oo tikniyoolajiyadeed ah, sidaa darteed "ka caawi" canshuuraha.
Una war weyn u ah qof kasta oo ku nool Midowga Yurub. In kasta oo aan jecel nahay shirkad sida Apple oo kale ah, iyaga iyo shirkad kastaaba waa inay bixiyaan canshuuraha u dhigma, canshuuraha in munaasabado badan la soo ururiyo mahadsanidiin habka. Waxaan rajeyneynaa in ragga ka socda Cupertino, ama Ireland kiiskan, aysan is arki doonin midba midka kale warar sidan oo kale ah mar kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay ku egtahay bixinta dhamaan canshuuraha ay ku laheyd dowlada Ireland
Waxaan horeyba uheysanay beta labaad oo loogu talagalay horumarinta iOS 12.1, watchOS 5.1 iyo tvOS 12.1
Apple waxay na siisaa afar koorso oo bilaash ah si aan uga faa iideysano iPad-ka qaab elektaroonig ah